Prerana Dayi Pratiyogi | Hamro Patro
प्रेरणादायी प्रतियोगीका कथा
को बन्छ करोडपतिले नेपालमा टेलिभिजन कार्यक्रमको दुनीयाँमा नौलो आयाम थपेको छ। सुरुवाति ७ एपिसोडमै केबीसी नेपाली दर्शकहरुको दैनिकी भैसकेको छ । युट्युबमा एकपछि अर्को एपिसोड ट्रेण्डिङमा आइरहेका छन भने हरेक शनिबार, आइतबार र सोमबार साँझको साढे आठ कुरिरहन्छन आमदर्शक टेलीभिजनमा । के युवा, के महिला के प्रौढ सबैले महानायक राजेश हमालसँग ज्ञान र मनोरञ्जनका कुरा गर्न उत्सुकता देखाइरहेका छन् । तिनै सहभागिहरुका प्रेरणा र संघर्षका कथा को बन्छ करोडपतिले टेलिभिजनबाट दर्शकहरुलाई देखाँउछ ।
यसरी नै मनोरञ्जन र केही रकम पुरस्कार जित्ने मात्र हैन, सफलता, संघर्ष र प्रेरणाका पर्दा पछाडीका कथाहरुलाई आमसञ्चारबाट प्रशारण भएकोमा सहभागीहरु खुशी छन् भने दर्शकहरु पनि आनन्दित छन् । एउटा भुँइमान्छेको सपना बनेको छ को बन्छ करोडपति कार्यक्रम । त्यस्तो सपना जसलाइ साकार बनाउन त्यती गाह्रो पनि छैन तर गौरवमय छ, आनन्ददायी छ । हेरौँ पछिल्लो एपिसोडका
केही यस्तै प्रेरणादायी सहभागीका कथाहरु:
झापा बिर्तामोडका सुरज कँडेलले केबीसीको सातौँ एपिसोडमा छानिए । आफ्ना १० प्रतिस्प्रधीलाई पन्छ्याउँदै फास्टेस्ट फिंगर फस्टबाट समेत सही उत्तर सबैभन्दा छिटो मिलाएर उनले हट सिटमा स्थान सुरक्षित बनाएपछि हर्षले भावविह्वोर भए । बुबा, आमा, श्रीमति र दुई सन्तानको भरोसा उनले को बन्छ करोडपतिमा सहभागी हुने सपना मात्र पुरा गरेनन् आफ्नो तितो विगतलाई बिर्सने माध्यम पनि बनाए आफ्नो सफलताले । कुलतमा फसेको विगतलाई बिर्सन उनले को बन्छ करोडपतिमा छनोट भएर हट सिटमा पग्नु जीवनकै ठलो फलता महशुस गरेका छन् । उनले भने,’मेरो बिर्सन लायक विगतलाई यो सफलताले ठूलो प्रेरणा दिएको छ ।’ अहिले सुरज आफै कुलतमा फसेकालाई पुनःस्थापनाकालागि योगदान गरिरहेका छन् ।
साथीहरुको कुसंगतमा परेर लागु औषधमा फसेको चारपाँच वर्ष कहाली लाग्दो समयबाट निस्केर परीवारलाई खुशी र आफुलाई आत्मबल मात्र हैन सुरजले उनीजस्तै परिस्थितीले कुलतमा फसेकाहरुलाइ ‘फेरि पनि सम्मानीत जीवनमा फर्किन सकिन्छ’ भन्ने प्रेरणा दिएका छन् । को बन्छ करोडपतिमा आफ्नै ज्ञानको पराक्रमले चालिस हजार रुपैयाँ जितेर परिवारमा खुशी र मनमा साहस थपेका सुरजजस्तै धेरैको सपना पुरा गर्ने थलो बन्न पुगेको छ केबीसी । त्यसैले त प्रस्तोता हमालले सुरजलाई पनि को बन्छ करोडपतिको तर्फबाटै सुखद भविष्यको शुभकामना दिँदै जीवनमा परिवर्तन संभव छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
हेर्नुहोस् सातौँ एपिसोडः
झापाकै विमला भट्टराई दहाल छैटौँ एपिसोडकी प्रतियोगी थीइन् । चालिसको दशकदेखि शिक्षण पेशामा आवद्ध उनी आफ्नो परिवारका अधिंकाश सदस्यसहित को बन्छ करोडपतिको सेटमा उपस्थित भइन् । हट सिटका लागि अघिल्लो दिननै छनोट भैसकेकी उनले सुझबुझका साथ आफ्नो ज्ञानको पराक्रम मात्र देखाइनन् लाइफलाइन प्रयोग नगरेरै खेल समाप्त गर्नुअघि १ लाख ६० हजार रकम आफ्नो बनाएर दर्शकहरुलाई आश्चर्यचकित पारिदिइन् ।
दाहालको अविष्मरणीय क्षणबारे भिडियो हेर्दाहेर्दै उनकी छोरीको विहेको माहोलमा हृदयघातका कारण बित्नुभएकी आमाको याद गरेर भावुक भइन् उनी । यस घट्नाले कार्यक्रम प्रस्तोता हमाललाई पनि भावुक बनायो । २४ वर्ष अघि हमालका पिता डा. चुँडा बहादुर हमालको पाकिस्तानमा राजदूत छँदा हृदयघातबाटै दुःखद् मृत्यु भएको थियो । यो भावुकताले संसारको जुनसुकै कुनामा भएपनि र नेपालभित्र जुनसुकै जात, धर्म सम्प्रदायका भएपनि नेपाली जाति एकताको सुत्रमा बाँध्न प्रेरित गर्‍यो । एकार्काको हर्षमा र पिडामा साथ दिने नेपाली उत्तम सँस्कार झल्कियो केबीसीमा ।
यसरी भर्खरका युवा मात्र हैन प्रौढ व्यक्तित्वहरुले पनि कार्यक्रमलाई सपना बनाएका छन् । केही पैसा जित्नेमात्र हैन आफ्ना अनुभव सुनाउने र अरुका कथा सुन्ने अनी हाँसो र पिडा साँझा गर्ने थलो बनेको को बन्छ करोडपतिलाई उनीहरुले आशीर्वाद दिएर जाने गरेका छन् । आजसम्मकै सर्वाधिक रकम जितेर आजसम्मकै सर्वाधिक उमेरसमुहकी हटसिट प्रतियोगी भट्टराईले किर्तिमानै किर्तिमान रचेर केबीसीलाई पनि शन्तुष्टी प्रदान गरिन् ।
हेर्नुहोस् छैटौँ एपिसोडः
सुनसरीकी कल्पना बास्तोला नीम्न मध्यम वर्गीय परिवारकी मिहेनती छोरी/बुहारी हुन् । को बन्छ करोडपति नेपालमा आउँछ र आफ्नै भाषामा हेर्न पाइएला भनेर पर्खेकी उनलाइ आफै सहभागि हुने सौभाग्य मिल्यो । सुकुम्वासी वस्तिमा दुःखजीलो जीवन बिताईरहेकी उनलाई आफ्नो र श्रीमानको अध्ययनलाइ निष्कर्षमा पुर्‍याउने चुनौती छ । सानैदेखि हाजीरिजवाफ र सामान्य ज्ञानमा रुची राख्ने उनी को बन्छ करोडपति हेरेर ज्ञान लिने सपना भन्दा माथी सहभागि भएर रकम जित्ने अवसर पाइन ।
आफ्नो मिहेनतले आर्जेको ज्ञानले ४० हजार रुपैँया जितेर उनले जीवनमा केही अभाव मात्र टारेकि छैनन, आत्मबल बढाँउदै थप मिहेनत गर्ने हौसला र उर्जा पनि लगेर गइन् । महिलाहरु घरको काममा मात्र सिमित हुने हैन, थप संघर्ष गरेर राज्य र समाजमा उदाहरण बन्ने आफ्नो धारणालाइ टेवा पुर्याएर धेरैको मन जितिन बास्तोलाले । उनको उपस्तीथीले संघर्षले थीचीएर सपना देख्नै बिर्सिएका नेपाली युवायुवतिको सपना जुर्मुराइदिएकी छिन् । त्यही जुर्मुराएको पनालाई साकार रुप दिन को बन्छ करोडपति सधैँका लागि सबैका लागि सहायकसिद्ध हुनेछ ।
हेर्नुहोस् पाँचौ एपिसोडः
टिभिमा आएर करोडपतिः घर बसेरै बनिन्छ लखपति !
यसरी टेलिभिजनमै सहभागी भएर रकम जित्ने सौभाग्य थोरैले पाउलान् तर हरेक एपिसोडमा घर बसेरै लखपति बन्ने अवसर हरेक नेपालीसँग छ । घर बसेर लखपति अन्तर्गत साताको तीन दिन चल्ने हरेक एपिसोडमा घर बसेरै दर्शकहरु मध्ये एक जना लखपति बन्न सक्नेछन् । श्री स्टिल्सले प्रायोजन गरेको यो खण्डमा हरेक एपिसोडमा एक प्रश्न सोधिनेछ जसको जवाफ एसएमएस र मोबाइल एपबाट पठाउन सकिनेछ ।